जहाँ महिलाले ब्रा र पे न्टी नै लगाउन नपाइने अनौठो चलन” – Sandesh Press
December 1, 2021 180
एजेन्सी । स माचारको शीर्षक पढ्दैमा तपाइँ छक्क पर्नुभयो होला । अहिलेको दुनियामा यस्ता देशपनि छन् जहाँ महिलाले ब्रा तथा पे न्टी समेत लगाउन पाउँदैनन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रै पर्छ । तर विश्वमा यस्ता देशको कमी छैन जहाँ अझैपनि महिलाहरु निकै तल्लो स्तरको जिवन बाँच्न बाध्य छन् र उनीहरुको स्वतन्त्रता छिनिएको छ ।
न त उनीहरुलाई आफ्नो इच्छा अनुसार खाने स्वतन्त्रता छ, न त कपडा लगाउने, घुम्ने र बोल्ने नै । यति भनिसकेपछि महिलाहरुले भि त्री वस्त्र लगाउन नपाउने कानून नि श्चय पनि गरीब तथा पि छडि एका कुनै देशहरुमा होला भन्ने लख का ट्नु भयो होला । तर होइन । दुनियाको सबैभन्दा धनी तथा विकशित र शक्तिशाली देश अमेरिकामै यस्तो कानून रहेछ ।
अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा यस्तो कानून छ, जसले महिलाहरुलाई भित्री वस्त्र लगाउन बन्देज गरेको छ । मिसौरीको कानूनले महिलाहरुलाई भित्री व स्त्र लगाउन रो क लगाएको छ र यदि कानूनको उल्लंघन गरेमा सख्त कारवाहीको प्रावधान छ । सयौँ वर्षदेखि उक्त कानून मिसौरीमा लागू छ ।
महिलाहरुलाई भित्री वस्त्र लगाउन रोक लगाउनुको अ नौठो कारण रहेछ । वास्तवमा त्यो महिलाकै हितका लागि पो रहेछ । भित्री वस्त्र लगाउँदा महिलाहरु आम अमेरिकी महिला भन्दा कम सुन्दर देखिने र सुडौल जिउ डालका लागि प्रशंसाको अधिकार गुमाउने तर्क गरिएको छ।
अझ रोचक कुरा त के भने त्यहाँ महिलाहरुले ना इट गाउन लगाउन पनि पाउँदैनन् । यदि ना इट गाउन लगाएको अवस्थामा कुनैपनि महिला अप्ठेरोमा परेर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उद्धारकर्मीहरुले त्यस्तो पहिरन लगाएको महिलालाई उद्धार गर्न नपाउने कानून पनि त्यहाँ छ । सायद यो कुनै निस्प्रभावी कानून हुनसक्छ ।
किनकी अहिलेका महिलाहरुले भित्री व स्त्र नलगाउने र सुत्दाखेरि नाइट गाउन नलगाउने भन्ने कुरै भएन ।एजेन्सी । स माचारको शीर्षक पढ्दैमा तपाइँ छक्क पर्नुभयो होला । अहिलेको दुनियामा यस्ता देशपनि छन् जहाँ महिलाले ब्रा तथा पे न्टी समेत लगाउन पाउँदैनन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रै पर्छ । तर विश्वमा यस्ता देशको कमी छैन जहाँ अझैपनि महिलाहरु निकै तल्लो स्तरको जिवन बाँच्न बाध्य छन् र उनीहरुको स्वतन्त्रता छिनिएको छ ।
किनकी अहिलेका महिलाहरुले भित्री व स्त्र नलगाउने र सुत्दाखेरि नाइट गाउन नलगाउने भन्ने कुरै भएन ।
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, ब्यानर पोस्ट
Prevदु:खद खबर भखरै फुल्दै गरेका कलिला मुनाहरु निन्द्रामै अस्ताए
Nextबाल्यकालदेखि नै अभिनेत्री प्रियंका छिन् यो रोगबाट पिडित !
जाने हैन त बेलायत ?नेपालबाट १० हजार कामदार लैजाने, तलब ४५ लाख !
एका बिहानै भू.कम्प
१८ वर्षीय किशोर र उनको साथीले गरेको काम देखेर प्रहरी पनि छक्क पर्यो
गर्भवती महिलाले यी ५ कुरा ख्याल राखे सजिलै जन्मिन्छ बच्चा, गर्नुपर्दैन् अप्रेशन